Filtrer les éléments par date : vendredi, 17 juillet 2020
vendredi, 17 juillet 2020 20:40
Maintirano: Olona hamonjy « carrière » naratra notafihin’ny dahalo
Lehilahy iray, handeha hamonjy asa any amin’ny toeram-pitrandrahana vato ao Antsijoriaky 15km miala an’i Maintirano no notafihin’ny dahalo teny an-dalana. Naratra mafy, tsaboina ao amin’ny hopitaly eto Maintirano izy amin’izao.
Manomboka tsy mandry fahalemana aty amin’ny faritry Melaky, ka miantso vonjy amin’ny Fanjakana ny mponina manoloana izany.
vendredi, 17 juillet 2020 20:38
Nanao taingin-droa tamin'ny moto: Naato tamin'ny asany ilay Polisy
Sary niparitaka tamin’ny facebook nampiseho Polisy iray nanao taingin-droa tamin’ny moto teny Itaosy teny no nanokafan’ny tompon'andraikitra teo anivon’ny Polisim-pirenena fanadihadiana, ka tonga tamin’ny fanapahan-kevitra nampiatoana tamin’ny asany avy hatrany ilay mpitandro ny filaminana hita amin'ny sary.
vendredi, 17 juillet 2020 12:05
Real Madrid: Voahosotra ho tompondakan’i Espaina
Nitondra ny Real Madrid any amin’ny anaram-boninahitra faha-34 maha tompondakan’i Espaina azy ny fandresena azony 2 noho 1 omaly, nanoloana ny Villarreal.
Ilay Frantsay, Karim Benzema no namono ny baolina roa mariky ny fandresena nandrombahan’ny Real Madrid indray ny tompondakan’i Espaina.
vendredi, 17 juillet 2020 11:13
Antoko HVM: Mitaky ny hamoahana tsy misy fepetra an’i Rahajason Harry Laurent
Nanao fanambarana ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM), ny 16 jolay 2020, ora vitsy taorian’ny nampidiran’ny fitsarana am-ponja an’i Rahajason Harry Laurent, minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana teo aloha, ary mpikambana ao amin’ny birao politikan’ny HVM.
Mitaky ny hamoahana tsy misy fepetra an’i Rahajason Harry Laurent ny HVM, mandrampiandry ny fotoam-pitsarana azy, mba tsy hampisy savorovoro ny firenena izay mandalo krizy ara-pahasalamana lalina amin’izao, araka ny fanambarana.
Miantso ny fitsarana mba hanao ny asany tsy misy teritery ho fitadiavana ny marina.
Aoka tsy ho raisina ho fanenjehana politika sy ho hery famoretana ny tsy fitovian-kevitra, hoy hatrany ny HVM tamin’ny alalan’i Rachidy Mohamed, Sekretera jeneraly nasionaly ; ity farany izay miantso ny Rodoben’ny mpanohitra hiara-hisalahy.
vendredi, 17 juillet 2020 11:03
Maevatanana: Tsy mianatra ny mpianatra anio zoma
Tsy mianatra ny mpianatra rehetra eto an-tampon-tanànan'i Maevatanana, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, anio zoma 17 jolay, araka ny fampahafantarana nataon’ny DRENETP Betsiboka.
Noraisina ny fepetra « noho ny fisian'ny trangan'aretina coronavirus eto Maevatanana » hoy ny fanazavana.
Manentana ny tsirairay avy mba hanaraka ireo toromarika ny DRENETP Betsiboka mba ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ity valan'aretina ity.
vendredi, 17 juillet 2020 10:37
Covid-19: Naiditra hopitaly ny minisitra teo aloha Rasoloelison Lanto
« Mbola aty amin’ny hopitaly aho, resetsika ny Covid », hoy Rasoloelison Lanto tamin’ny pejiny facebook. Minisitry ny angovo sy ny akoran’afo, ary efa minisitry ny fitantanam-bola sy tetibola tamin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina izy.
vendredi, 17 juillet 2020 09:24
Émoji, ou emoji, est un terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et les pages web japonaises, qui se sont répandus dans le monde entier. Le mot emoji signifie littéralement « image » + « lettre » ; la ressemblance avec « émotion » est un jeu de mot interculturel.
vendredi, 17 juillet 2020 09:22
17 juillet: Journée mondiale de la justice internationale.
vendredi, 17 juillet 2020 09:19
Fandresena 2020: Ahemotra ho amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra
Notapahana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly fa ahemotra ny lanonana ara-miaramila hamoahana ny andiany « FANDRESENA 2020 », noho ny fahamehana ara-pahasalamana sy noho ny fotoana lalovan’ny firenena ankehitriny.
Office National pour l’Environnement: Nesorina ny Tale Jeneraly
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana manendry ny Tale Jeneraly « Office National pour l’Environnement » (ONE).
Noraisina ny fanapahan-kevitra, 24 ora taorian’ny nahamay kila hotohoton’ny afo ny foiben’ny ONE eo Antaninarenina.